Shiinaha Er, Cr: Glass / Er, Cr, Yb: Soo-saaraha Wax-soo-saaraha iyo Alaab-qeybiye | Dien
Er, Cr: Glass / Er, Cr, Yb: Muraayad
Dhexroor Rod: ilaa 15 mm
Dulqaadka dhexroor: +0.0000 / -0.0020 gudaha
Dulqaadashada Length: +0.040 / -0.000 gudaha
Janjeeri / xagal xagal: 5 daqiiqo
Chamfer: 0.005 ± 0.003 gudaha
Xagasha Chamfer: 45 deg ± 5 deg
Erbium iyo ytterbium co-doped fosflate galaas wuxuu leeyahay codsi ballaaran sababtoo ah sifooyinka wanaagsan. Badanaa, waa sheyga ugu fiican muraayadda loogu talagalay laser-ka 1.54 duem sababtoo ah indhaheeda dhererka amniga ee 1540 nm iyo gudbinta sare ee jawiga. Waxay sidoo kale ku habboon tahay codsiyada caafimaadka halkaasoo baahida loo qabo ilaalinta indhaha ay adkaan karto in la maareeyo ama la dhimo ama laga horjoogsado kormeerka muuqaalka muhiimka ah. Dhawaan waxaa loo isticmaalay isgaarsiinta fiber optic halkii EDFA loogu talagalay iyada oo aad u dheer. Horumar weyn ayaa ka jira arimahan.
Erbium Glass wuxuu ku daalay Er 3+ iyo Yb 3+ wuxuuna ku habboon yahay codsiyada ku lug leh heerarka ku celcelinta sare (1 - 6 Hz) waxaana lagu shubayaa dyoodyada laser-ka ee 1535 nm. Muraayaddan waxaa lagu heli karaa heerar sare oo Erbium ah (illaa 1.7%).
Erbium Glass wuxuu ku dahaadhay Er 3+, Yb 3+ iyo Cr 3+ wuxuuna ku habboon yahay codsiyada ku lug leh mashiinka laambada xenon. Muraayaddan waxaa badanaa loo adeegsadaa codsiyada kala duwan ee laser-raadiyaha (LRF).
Shayga Cutubyo EAT14 Cr14
Heerkulka isbedelka .C 556 455
Heerkulka jilicsan .C 605 493
Lacagta. Ballaarinta kuleylka toosan (20 ~ 100ºC) 10‾⁷ / ºC 87 103
Qabsashada Kuleylka (@ 25ºC) W / m. .K 0.7 0.7
U adkaysiga kiimikada (@ 100ºC miisaanka luminta heerka biyo diirran) ug / hr.cm2 52 103
Cufnaanta g / cm2 3.06 3.1
Fiinta Mawjadaha Laser nm 1535 1535
Isweydaarsi loogu talo galay Qiiqa kicinta 10‾²º cm 0.8 0.8
Nolosha dhalaalka ms 7.7-8.0 7.7-8.0
Tusmada Refractive (nD) @ 589 nm 1.532 1.539
Tusmada Refractive (nD) @ 589 nm 1.524 1.53
Qiyaasta kuleylka. ee Dhererka Jidka indhaha (20 ~ 100ºC) 10‾⁷ / ºC 29 3.6
Daaweynta caadiga ah
Kaladuwanaansho Er 3+ Yb 3+ Cr 3+
Er: Yb: Cr: Muraayad 0.13 × 10 ^ 20 / cm3 12.3 × 10 ^ 20 / cm3 0.15 × 10 ^ 20 / cm3
Er: Yb: Muraayad 1.3 × 10 ^ 20 / cm3 10 × 10 ^ 20 / cm3